Muujinta Hoggaanka, Calaamadda Hoggaaminta, Calaamadaha Dijital ah - Yonwaytech
Shenzhen Yonwaytech Co., Xaddidan waa soo saaraha soo bandhigga muuqaalka LED ee ku saleysan Shenzhen PRC.
Shayga oo ay kujiraan shaashadda LED-ka ee banaanka, Muuqaalka Gudaha Gudaha, Muuqaalka Wareegsan ee Pixel Pitch HD LED, Muraayadda LED-ka ee Heerka Kireysiga iyo Bandhigga Fudud ee Dibadda.
Waxaan aaminsanahay jihaynta macaamiisha, Yonwaytech had iyo jeer waxay ku hawlan tahay bixinta adeegyo tayo sare leh iyada oo loo marayo shaqadeena.
Dhammaan Hal Tafaariiqle Tartan & Ciyaaraha Kubadda Cagta ee LED
Qalabka hawlgalka ee fudud iyo nidaamka ciyaarta oo loo qaabeeyey, PC looma baahna, kharash badan oo badbaadaya oo ku habboon. Miisaanka fudud ee fudud iyo khafiifka ah ee lagu qaabeeyey pixel 1.8mm / 2.0mm /2.5mm / 3.0mm / 4.0mm / 5.0mm oo ku yaal 80 "width 640mm × height 1920mm.
Miisaanka fudud ee fudud, hawlgalka fudud ee qufulada degdega ah iyo isku xirayaasha rakibidda go'an ama laallaada. Daboolida moduleka jilicsan ee polymer iyo daboolka sare ee cudbiga cudbi sare si looga hortago dhaawacyada isku dhaca inta lagu jiro dhacdooyinka isboortiga. Armaajooyinka daawaha ah ee 'Magnesium alloy' oo leh kuleyl aad u fiican iyo qaab dhismeed adag. IP65 proof iyo 3840hz cabir cusbooneysiin wanaagsan oo loogu talagalay isticmaalka garoonka ciyaaraha iyo duubista fiidiyowga.
Isdhexgalka Isdhexgalka Qoob-ka-ciyaarka Muuqaalka Muuqaalka LED-ka.
Muuqaalka dabaqa caqliga leh ayaa soo bandhigay, oo lagu dhajiyay is-dhexgal xawaare sare leh oo ku socda IC gudaha 0.02 millisecond. Qaab dhismeed adag oo adag oo xoog leh, oo dhab ahaan u qaadaya 2 tan mitirkiiba. IP65-biyo-la'aan, boodh-la'aan, warqad anti iyo xoq ah. Si xamaasad leh ayaa loogu isticmaalay discos, pubs, T-stage, riwaayadaha, iyo riwaayadaha. dhacdooyinka iyo sidoo kale rakibidda go'an. Wanaagsan u adeegsiga muddada-gaaban ee bandhigyada, bandhigyada baabuurta, bandhigyada moodooyinka ama bandhigyada TV-ga.
Noocyada kala duwan ee Muuqaalka Module LED
Bannaanka P2.5, DIP P10 P16, jilicsanaanta gudaha. Qayb la isku halleyn karo oo lagu kalsoonaan karo oo loogu talagalay isticmaalka gudaha iyo dibedda, xulasho ballaadhan oo pixel ah.
Aaminaaddaada hal-joojiye Display Soo-saare & Dhoofiye.
Adeegga 7x24 & Taakulaynta Internetka
7 × 24 saac isgaadhsiin deg deg ah, jawaab deg deg ah, soo jeedin mashruuc bilaash ah, adeegga jawaab celinta wax soo saarka dhow, nidaamka saadka ee haboon, keenista degdega ah.
Tayo Sare oo Qiimo Macquul ah leh
Waxaan ku haynaa qiime macquul ah oo leh tayo la isku halleyn karo. Weligaa ha ku bixin tayada, waxaan kaliya la soconnaa noocyada ugu sarreeya ee qalabka. Waxaan sii wadnaa iskaashi adag Natiosnstar, Kinglight, MarcoBIock, Meanwell si loo hubiyo in alaabtayada ay u adeegsadaan tikniyoolajiyadda dhamaadka sare si ay ugu hogaamiyaan suuqa
13 + Khibrad Sanado ah Soo Bandhigida LED-ka
Kooxdayada xoogga leh ee leh awoodda ugu wanaagsan ee naqshadeynta & soo saarista farsamada iyo elektaroniga. Waxaan qadarinaynaa mid kasta oo ka mid ah kalsoonida macmiilkayaga oo waxaan ka dhignaa fikradahooda inay noqdaan kuwo dhab ah. 13 + waayo-aragnimo sannado ah oo la soo bandhigay, waxaan soo saarnaa oo u dhoofinnaa aaminaad gacmahaaga ah.
Baaxad Wide Of LED Display Product Ikhtiyaar
Waxaan soosaaraynaa noocyo kaladuwan oo LED ah, gudaha & banaanka, kirada, garoonka pixel cidhiidhi ah, codsiyada suuqyada DOOH, bandhigyada, dhacdooyinka marxaladaha, shirarka, tafaariiqda hoteelada, TV-yada, riwaayadaha, kaniisadaha iwm. Adeegga soo-bandhigida loo habeeyay ee loo habeeyay ayaa laga heli karaa YONWAYTECH
Xakamaynta Tayada adag ee loo maro Shaashadeena LED-ka
Iyada oo leh niyad wanaag, ixtiraam, heer sare iyo naxariis, Yonwaytech waxay dhistaa oo ilaalisaa kalsooni qoto dheer macaamiisheenna, waratadayada, iyo kooxdayada. Waxaan had iyo jeer ku hawlan nahay bixinta adeegyo tayo sare leh iyada oo loo marayo shaqadeena dhammaan macaamiisheenna ku sugan 6 qaaradaha, waxaan si joogto ah u sii wadi doonnaa inaan si fiican kuugu adeegno.
Waa maxay heerka Cadeynta IP? Maxay uga dhigan tahay muujinta la hogaaminayo?
Bandhig kasta oo hogaaminaya dadku way ogyihiin in muujinta banaanka hore ay tahay inay lahaato heer IP caddeyn fiican ah si loo hubiyo tayada wanaagsan. R&D injineerada YONWAYTECH LED bandhigay hadda si fudud u kala soocaan aqoonta LED bandhigay bandhigay biyuhu kuu. Guud ahaan, heerka ilaalinta shaashadda muujinta LED-ga waa IP XY. Wixii ...
Laydhku waa "Iftiiminta Diode", qaybta ugu yar waa 8.5 inji, waxay awood u yeelan kartaa dayactirka iyo isbeddelka cutubka, waqtiga nolosha LED ka badan 100,000 saacadood. DLP waa “Digital Light Procession” cabirka qiyaastii 50inch ~ 100inch time waqtiga nolosha qiyaastii 8000 saacadood. ubaahantahay bedel jumlo ah haduu guluubka gashado iyo ...
Hababka dayactirka ee muujinta hogaamintu badanaa waxay u qaybsan yihiin dayactirka hore iyo dib-u-hagaajinta. Dib-u-hagaajinta loo isticmaalo shaashadda LED-ka ee dhismaha derbiyada dibedda, waa in loogu talagalay dhinaca dhabarka dambe si qofku u sameeyo dayactir iyo dib-u-hagaajin xagga dambe ee shaashadda ...